Wararka - Mashiinka dhulka lagu shiidiyo waxaa loola jeedaa daaweynta shiidida / dhagaxa / terrazzo / epoxy dhulka
Dhulku shiidi doono waxaa loola jeedaa daaweynta shiidida / dhagaxa / terrazzo / epoxy dhulka, taas oo si wax ku ool ah u nadiifisa terrazzo, dusha sare oo la taaban karo, lakabka hoobiye epoxy iyo dhulka saliida duugga ah, iwm. Dabaqa tallaabada ugu horreysa ee xoqidda qallafsan, ee geeddi-socodka cabbirka cabbirka weyn Saddex Kabo Rhombus Qaybaha Shiidi Kabaha shiidi ganaax, safeeyey iyo tallaabooyin kale.
Ka dhig dusha sagxadda mid nadiif ah, ka sii dhalaal badan, oo ka jilicsan, sidaasna ku hagaajin kara bilicsanaanta dabaqa. Qalabka sida caadiga ah loo isticmaalo ee wax lagu shiido waa mashiinka mashiinka lagu shiido dhulka, 490, mashiinka safeeya iyo qalabka kale ee la xiriira.
Sidee ayuu u shaqeeyaa howlaha guud ee shiidaya jumladaha jajabku?
1. Daaweynta oogada: Adeegso makiinadda dheemanka ee aan lahayn boodhka si aad uga saarto boodhka dul sabeynaya dusha sibidhka oo aad u sameysato dusha sare dusha sare. Adeegso faakiyuum si aad uga saarto ciidda, qashinka iyo siigada. Ku qallaji aagga qoyan gaas ama qalajiyaha.
2. Primer: Ku dheji wakiilka ugu weyn iyo hardenka maaddada si isu dhigma, si buuxda ugu qas qaso, oo si siman walxaha ugu nadiifi burush, burush rullaluistemadka ama qoriga buufinta marka la isticmaalayo sameynta rinjiga aasaasiga ah, iyo rinjiga rarka waqtiga waa kala maqnaa In ka badan 8 saacadood.
3. Daahan Dhexdhexaad ah: Qaado saamiga xaddiga ah ee wakiilka ugu weyn iyo hardener, ku walaaq si isku mid ah aaladda wax lagu qaso, ka dib ku dar wadarta quartz, isku walaaq si siman, isticmaal trowel si aad ugu fidiso isku darka kore dusha sare ee asaasiga muddada la isticmaali karo. , Si godadka iyo godadka godadku u buuxsamaan.
4. Koodhka sare: Kadib cusbada ka mid ah jaakadda dhexdhexaadka ah way adkaatay, haddii ay jiraan qaybo ka mid ah dusha sare, waa in marka hore dhulka laga sii daayaa, oo godadka waa in la buuxiyaa, ka dibna la qaataa saamiga tirada ee wakiilka ugu weyn iyo qalabka si buuxda loo walaaqo oo loo qaso, oo loo simo jaakadda dhexe tuwaal. Isla mar ahaantaana, ka hor inta aan la sifeynin, cirbadda cirbadda ayaa loo isticmaalaa in lagu rogo horay iyo dibba hoosaada dhoobada, si wadarta loo siman yahay loo qaybiyo oo goobooyin hawo looga saaro, si dusha dusha sare uu u noqdo mid siman oo dhalaalaya.
Geeddi-socodka qashin-qubka: Qalitaanka dhagxaanta waa hab muhiim u ah ilaalinta dhagxaanta. Dhagaxyada qaarkood si toos ah ayaa loo nadiifin karaa.
Ujeedada ugu weyn ee nadiifinta waa in la kordhiyo dhalaalka dusha sare ee dhagaxa. Mideynta dhagxaanta guud ahaan waxaa loo sameeyaa iyadoo la raacayo nidaamka miiqashada qallafsan grind shiidika ganaax-san → shiidi kara → shiidi kara → nadiifinta, iyo qaar ka mid ah tallaabooyinka qallafsan ee wax lagu shiido waa laga tagi karaa, inta badan waxay kuxirantahay in dusha sare ee dhagaxa hore la maray daaweyn hordhac ah.
Ing Dhabar jabinta: Qalabka wax lagu shiidiyo waxaa looga baahan yahay inuu qaato middi qoto dheer, waxtarka wax lagu shiido wuu sarreeyaa, qaabka wax loo shiidana waa mid aan dhab ahayn, oogada dhulkuna waa mid qallafsan. Waxay inta badan ka saartaa astaamaha baalashada miinshaartii uu ka tagay dhagaxu geeddi socodkii hore iyo habsami u socodka dhagaxa, Dusha sare ee qaabaynta ayaa dhulka ku jirta;
Grind Shiidi ganaax-nus ah: ka saar raadadka wax shiidida xun si loo sameeyo khadad cusub oo fiican, si dusha sare ee dhagaxu u ahaado mid siman oo siman;
GrindDhibaatooyin Fiican: Qaabka, jajabyada iyo midabka dusha sare ee dhagaxa ka dib markii si fiican loo shiiday ayaa si cad loo soo bandhigay, dusha sare waa hagaagsan yahay oo siman yahay, waxaana jira dhalaal jilicsan;
GrindFinqin Fiican: Dhagaxa dushiisa saxitaanka kadib, oon lahayn raadad indho qaawan. Dusha sare ayaa ka sii macaan, dhalaalna wuxuu gaari karaa illaa 55 digrii ama ka badan;
Nadiifinta: Adeegso mashiin gaar ah oo sifeeya dhagaxa si aad uga shiiddo dhagaxa dhagax adag ilaa Nambar 50 ilaa Lambarka 3000 si aad dhulka uga dhigto mid dhalaala oo siman sida cusub. Dusha sare ee dhagaxa leh ayaa u dhalaalaya sida muraayadda oo kale, dhalaalkiisuna wuxuu gaari karaa in ka badan 85 darajo. Marka loo eego noocyada kala duwan ee dhagaxa, geeddi-socodka nadiifinta ee kala duwan ayaa loo isticmaalaa.
1. Nidaamka nadiifinta ee guddiga fidsan: hubi xaaladda qalabka hagaajinta xabagta-hubinta ka hor bilawga-saxanka sare-jaridda-bilow madax kasta oo shiidi doona markiisa u fiirso xaaladda qummanaanta-hagaaji cabbiraadda qallalan-qallajinta, nadiifinta -Waxbarasho-baakad-baakad hoose.
2. Mashiinka xoqidda iyo nadiifinta ee arc panel: hubi sheyga xaalad-xabagta dayactirka-buugga qashin-qashin-kormeer-guddi sare-hubi ka hor inta aanad bilaabin-shiidi-hubinta shiidan xaalad-shiidan ganaax-nadiifinta-jeegga-jeexjeexa guddiga hoose-hoose.
3. Mashiinka xoqidda iyo nadiifinta ee khadadka qaabdhismeedka qaaska ah: hubi xaaladda sheyga-hubi in qaabka qaabku yahay khadadka qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka xaddidan labada dhinacba illaa labada dhinacba mindi dhexdhexaad-shiidaya-kala-bixis-biyo dhagax mindi 400 # Ka dib markii la kala-jaro-shiida iyo sifaynta-kormeerka.